Tafakkur - NuuralHudaa
Uumamni Kaappiibaaraa jedhamu kun sanyiiwwan hantuutaa keessatti kan ramadamu yoo tahu, sanyiiwwan kana keessaallee isa guddaa dha. Ulfaatinni isaa kiloograama 75 yoo ta’u, dheerinni qoffee isaa irraa haga eegee isaa jiru ammoo meetira 1.4 ta’a. Bineensi kun…
Nuuralhudaa	 Apr 24, 2022
Qaamni ilma namaa diizaayina addaatiin uumame. teknoolojii hin dulloomne, kan yeroon irra hin tarre dizaayinii uumamaati. Qaamni ilma namaa akka meeshaa teknoolojiin hammayyaa oomishuutti fooyyeffamaa hin deemu; ilmi namaa gaafa dura biyyeerraa uumamus ilmuma namaati. Ammas ilmuma namaati. Akka meeshaa teknoolojii S1, S2, 3G, 4G maqaa jedhuun…
Nuuralhudaa	 Apr 13, 2022
Wantoota Rabbiin uume kan ilmi namaa bira gahuu dandahe xiinxalliin laallee, dandeeytii Rabbii guddaa tafakurra. Kaayyoon barruu tanaa fi kanneen birootis, Muslimootaaf iimaana cimsuu hogguu tahu, warra Rabbitti hin amaninniif ammoo karaa…
Warra Jireenya Rabbii Ragaan Mirkaneeffachuu Fedhuuf!
Nuuralhudaa	 Apr 8, 2022
Jaarraa dheeraadhaaf ilmi namaa Gooftatti amanaa ture. Haalli itti gabbaran garaagarummaa haa qabaatu malee, namni hundi gooftaa gabbaru qaba. Ummanni Islaamummaa, Kiristaanummaa fi amantii Yahuudaa hin argin hedduun isaanii amantii…
Nuuralhudaa	 Apr 5, 2022
Akkuma bifti namaa gaaraa garummaa qabu, haalaafi amalli namaatis wal dhaba. Amantiifi ideology namaatis adda adda. Namni hundi akka itti yaadu qaba. Wanti nama tokkoof tahu nama birootiif tahuu dhabuu mala. Waan tokko jaalatu kuun ni…
Uumamaa fi Guddina Ulfaa
NuuralHudaa	 Apr 2, 2022
Qur’aanni Jecha Rabbii kan Inni Nabiyyii Isaa Muhammad ﷺ Irratti buuse. Rasuulli ﷺ Qur’aana kana qomaan haffazanii, sahaabota isaanii barreessisiisaa turan. Sahaabonnis eega barreessanii booda, waan barreessan deebisanii dubbisaniif. Waan…
Eenyutu Hawaa kana uume?
Nuuralhudaa	 Mar 5, 2022
Uumamni dachii tana dabalatee hawaa guutuu keessa jiru dandeettii fi guddina Rabbii tokkichaa ragaa nuuf baha. Nutis kanuma bu’uura godhachuun barruulee amma dura isiniif dhiheessaa turre hedduu keessatti, namoota jireenya Rabbii irraa shakkii qabaniif, deebisaa quubsaa ragaan deeggarame akka tahuuf, worroota Rabbitti amananiif ammoo yaadachiisa…
Nuuralhudaa	 Mar 1, 2022
Rabbiin warra sammuu qabu ykn warra waa xiinxallu hoggaa jedhu warra akkam baana. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ…
Nuuralhudaa	 Feb 25, 2022
Meerkuriin plaanetoota hanga amaatti beekaman keesaa xiqqoo yoo taatu, Adutti dhihaattee argamti. maqaan Meerkurii jedhu kun, maqaa sanamaa warri…
Nuuralhudaa	 Feb 21, 2022
Veenas Aduu irraa Meerikuritti aanuudhaan lammaffaa irratti argamti. Dachiin irra jirru tun ammoo Sadaffaa irratti argamti. Veenas Wantoota Hawaa kana keessa jiran keessaa ifa qabaachuudhaan Aduu fi Addeessatti aantee sadarkaa sadaffaa iratti argamti. Veenas Halkan Halkan Sirritti iftee mul’atti. Carraan yoo argame, Teeleeskooppiidhaan malee…
Nuuralhudaa	 Feb 17, 2022
Pilaaneetoonni ilmi namaa hanga ammaatti argama isaanii qajeellotti beeke sagal yoo tahan, hundi isaaniituu kan jiraachuun isaanii saayinsii qabatamaan…
Nuuralhudaa	 Feb 13, 2022
Uumaa Rabbii keennaa laakkofnee fixuu hin dandeennu. Rabbiin hawaa kana haala ajaa’ibaatiin uumee jira. Uumamni isaa hir’ina takkallee hin qabu. Hunduu…
Allaattii Paafiin (Puffin)
Nuuralhudaa	 Apr 10, 2022
Paafiin sanyii xiqqoo seabird ykn simbira bishaanii keessatti ramadama. Simbira bishaanii jechuun maal jechuudha jettanii hin ajaa’ibinaa. Simbira bishaan jala lixee adamsuu danda’u jechuudha. Sanyiin simbira bishaanii heddutu jira. Barruu tanaan garuu, waahee sanyii Paafiin qofa waliin ilaalla in shaa ALLAH. Paafiin simbira xiqqaadha.…
Nuuralhudaa	 Mar 26, 2022
Simbirri tun afaan Ingiliffaatiin Umbrellabird jedhamti. Umbrella jechuun afaan oromootiin dibaabee ykn amaariffaan "ጃንጥላ" jechuudha. Maqaa kanas kan argattee…
Nuuralhudaa	 Feb 15, 2022
Uumamni har’aaf isinii filadhe sanyii Simbirrooti. Simbirroon tunis Urunguu jedhamti. Simbirroonni heddu Urunguu ni sodaatu. Kanaaf yeroo heddu namoonni mana…
Nuuralhudaa	 Jan 29, 2022
Qophii Abu Ibtisam Simbirri halkanii qaama ajaa’ibaa qaba. Koolli isaa fiixee miila isaatirraa kaasee hanga ceekuutti argama. Simbirroonni hedduun isaanii…
Nuuralhudaa	 Jan 21, 2022
Qophii: Abu Ibtisam Simbirri Kiwwii jedhamu kun gosa Simbiraa barriissuu hin dandeenye yookaan afaan Ingiliffaatiin Ratites jedhamu keessatti ramadama.…
Nuuralhudaa	 May 2, 2022
Maqaa kanniisaa yoo kaasnu, hundi keenya waahee dayma isaa yaadanna. Daymi fayyaa ilma namaatiif akkaan barbaachisaadha. Qananii Rabbiin guddaan nutti arjoome keessaa kanniisni isa tokko jechuu dandeenya. Kanniisni sanyiiwwan gurguddoo torba qaba. Gareen torban kunniin ammoo sanyii xixiqqaa 44tti…
Nuuralhudaa	 Feb 5, 2022
Uumamni Dragonfly jedhamu kun Afaan Amaaraatiin “Yewuhaa tarb” jedhama. Saayintistoonni uumama kana Ilbiisa …
Nuuralhudaa	 Dec 29, 2021
Qophii: Abu Ibtisaam Mixiin uumama akkaan xiqqaa keessaa isii takka. Akkasumas lafa lubbu qabeeyyiin…
Qaajjibbuu (DeathStalker Scorpion)
Nuuralhudaa	 Dec 21, 2021
Gosti Qaajjibbuu kanaa maqaalee heddu qaba. Isaan keessaa Qaajjibbuu Israa’el, Qaajjibbuu Omdurman, Qaajjibbuu gammoojjii maqaalee jedhaniinis ni beekama. Hammeenyaa fi balaa uumama garagaraa irraan gahuu danda’u irratti hundaa’aniiti deathstalker Scorpion jedhanii moggaasan. Namni qaajjibbuu kanaan…
Daara baaftuu (Aaroo)
Nuuralhudaa	 Dec 8, 2021
Uumamni kun Daarabaaftuu ykn Sarariitii jedhama. Nannoo tokko tokkotti Jirbi footuu, Aara’oo ykn Aaroos ni…
Nuuralhudaa	 Jan 16, 2022
Qophii: Abu Ibtisam Qaamni bishaanii dachii irratti argamu uumama hedduu of keessaa qaba. Uumamni kunniin ammoo amalaa fi haala garagraa qabu. Gariin isaanii ilma namaatiif akkaan hamaa yoo ta’an, gariin isaanii ammoo ilma nama irra kan miidhaa hin geessinetu jira. Gariin soorata ilmi namaa akkaan jaalatuuf yoo oolan, gariin ammoo hiriyyaa fi…
Nuuralhudaa	 Jan 3, 2022
Qophii: Abu Ibtisam Oktopas uumama dachii tanarra jiran keessaa kan ajaa’ibaati. Maqaan oktopas jedhu…
Waa’ee qaama keenyaa hagam takka beeyna?
Nuuralhudaa	 Jan 2, 2022
Avreejiidhaan onneen teenya daqiiqaa tokko keessatti yeroo 80 dhahatti. Saa’aa tokko keessatti…
Nuuralhudaa	 Nov 20, 2021
Gosa qurxummii keessaa tokko maqaan isaa “SawFish” jedhama. Qajeelatti yoo gara afaan Oromootti hiiknu “Qurxummii…
Nuuralhudaa	 Nov 18, 2021
Qaamni bishaanii lafa kanarratti argamu bineensota gara garaatiif dahoo qubannaa tahee jira. Uumamaaleen bishaan…